Barnaamijka Tartan iyo Tacliim ee radio Daljir oo xalay galay habeenkii sideedaad,natiijooyinkii tartanka xalay – Radio Daljir
Luulyo 31, 2012 11:33 b 0
Bosaso, July 31 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliim oo ay ku tartamaan dugsiyada sare ee deegaanada Puntland, ayna baahiso radio Daljir oo kaashanaya wasaaradda waxbarshada Puntland, daladda PEN iyo? shirkadda Golis ayaa xalay galay habeenkii sideedaad.
Tartanka oo ka koobnaa laba qaybood ayaa waxaa ku tartamay afar dugsi sare oo ka mid ah dugsiyada waxbarsho ee barnaamijka sanadkan ka qaybgalaysa.
Qaybtii hore ayaa waxaa ku tartamay Xamdaan Bosaso iyo Xaaji Salaad Carmo,dusgi kasta ayaa waxaa la waydiiyay lix su’aalood sida sharciga barnaamijka uu qabo.
Gudoomiye kuxigeenka? barnaamijka Tartan iyo Tacliim Jaamac Yaasiin Jaamac ayaa gabagbadii ku dhawaaqay natiijada tartanka dugsiyada sare ee Xamdaan Bosaso iyo Xaaji salaad Carmo.
Dugsiga sare ee Xaaji Salaad Carmo oo la waydiiyay lix su’aalood oo uu xaqa u lahaa, ayuu ka jawaabay sadex su’aal, waxaa uu qalday sadex su’aalood ee uu xaqa u lahaa, wax ka faa’iidaysi ah ma helin, sidaasi ayuu ku helay 6-darajo.
Dugsiga Xamdaan oo la waydiiyay lix su’aal oo uu xaqa u lahaa ayaa waxaa uu ka jawaabay shan ka mid ah su’aalihiisii, waxaa uu qalday hal su’aal, sidaasi ayuu ku helay kow iyo toban darajo guushii tartankana ay ku raacday.
Qaybtii labaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliim ayaa waxaa ku baratamay dugsiyada dugsiyada sare ee kala ah Imaamu Shaafici Bosaso iyo Cumar Bin Cabdul Casiis.
Dugsiga Cumar Bin Cabdul Casiis lixdii su’aal ee la waydiiyay waxaa uu ka jawaabay? sadex su’aalood oo uu ku helay lix darajo, kafaa’iidaysi ahaana? waxaa uu u helay laba su’aal oo u dhiganta laba darajo, wadarta guud dugsiga sarre Cumar Bin Cabdul Casiis uu helay ayaa noqotay sideed darajo.
Dugsiga sare ee Imaamu Shaafici Boosaaso ayaa waxaa la waydiiyay lix su’aal, waxaa uu ka jawaabay sadex ka mid su’aalihii la waydiiyay ,waxaa uu ka faa’iidaystay sadex su’aalood oo uu garan waayay dugsiga Cumar Bin Cabdul Casiis, sidaasi ayaa waxaa uu ku helay sagaal darajo guushiina ay ku raacday.
Caawa oo tartanka gelli doono habeenkii sagaalaad ayaa waxaa ku tartami doona afar dugsi oo kalla ah.
Al-Nuur Baran Vs Mumtada Qardho
Al-Azhar Qardho Vs Gaarissa School Bosaso.